लगातार तीनदिन घटेको बजार मंगलवार २.९२ अंकले बढ्यो, बढेको बजारमा कारोबार रकम भने कम | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण लगातार तीनदिन घटेको बजार मंगलवार २.९२ अंकले बढ्यो, बढेको बजारमा कारोबार रकम भने कम
on: July 09, 2019 नेप्से विश्लेषण, लगानी
लगातार तीनदिन घटेको बजार मंगलवार २.९२ अंकले बढ्यो, बढेको बजारमा कारोबार रकम भने कम
असार २४, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ९२ अंक बढेर १ हजार २५० दशमलव २७ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार २४७ दशमलव ४१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टाको अवधिमा ओरालो लागेर १ हजार २४४ दशमलव ३७ विन्दुसम्म पुगेको थियो । सो विन्दु पश्चात घटबढ हुँदै गरेको बजार दोस्रो घण्टाको अवधिपछि बढेर १ हजार २५२ दशमलव २० विन्दुसम्म पुगेको थियो । अन्त्यमा बजार बढेर बन्द भएको छ । बढेको बजारमा कारोबार रकम कम छ । यसदिन कम कित्ता कारोबारमा आउँदा कारोबार रकम पनि कम भएको छ । तीन दिन निरन्तर ओरालो लागेको बजारमा यसदिन बढेर बन्द भएको हो ।
मौद्रिक निती र बिग मर्जरको चर्चाले शेयरमूल्य न्यून भएका कम्पनीको शेयर लगानीकर्ताहरुले उठाउदै आएका छन् । मंगलवार कारोबार अवधिभर ११ समूहको परिसूचकमा होटल समूह, निर्जीवन बीमा समूह, लघुवित्त समूह र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक बढ्दा समग्र नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २३ प्रतिशत बढेको छ ।
यसदिन रू. ४६ करोड ८२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २० दशमलव ७७ प्रतिशत कम हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव २७ अंक बढेर २६९ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबार भएका १६५ कम्पनीमा ७२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ६२ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । साथै, ३१ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
इन्फीनिटी लघुवित्तको शेयरमूल्यमा सर्किट ब्रेक
मंगलवारको कारोबारमा इन्फीनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा रू. ३४ ले वृद्धि भई रू. ३७७ मा सीमित भएको छ । सोमवारदेखि कारोबार शुरु भएको कम्पनीको यो दोस्रो दिन लगातार सर्किट लागेको हो । यस्तै असार २३ गतेदेखि १ः८६५ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरीरहेको मल्टीपर्पस फिनान्सको शेयरमूल्य ८ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. १३५ पुगेको छ । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्य ४ दशमलव २८ प्रतिशत घटेर रू. ४०२ मा सीमित भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा रू. १८ ले घटेको छ । यस्तै समिट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरको शेयरमूल्य ३ दशमलव ९२ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा रू. २० ले कम भई रू. ४९० पुगेको छ ।
सर्वाधिक कारोबार हुने शीर्ष १० कम्पनीमा बैंकिङ समूहअन्तर्गतका ९ कम्पनी
मंगलवारको कारोबारमा बैंकिङ समूहअन्तर्गतका कम्पनीहरुको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संस्थापक शेयरको सर्वाधिक बढी रू. ६ करोड २ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको यसदिन अन्तिम शेयरमूल्य रू. ४६९ मा खरीद विक्री भई २ लाख ४२ हजार ३८१ कित्ता शेयरको कारोबार भएको हो । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रो स्थानमा लक्ष्मी बैंकको रू. ४ करोड १३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २२६ कायम रहेको छ ।